Iindaba - Zithini iimpawu zelaphu lepolyester taffeta
I-Taffeta ikwabizwa ngokuba yi-polyester taffeta, ilaphu eliqheleke kakhulu ebomini, kodwa ukongeza kubantu abaqeqeshiweyo, abantu abaqhelekileyo ekuqondeni kwakhe akucaci, ngenxa yoko siye siziqonde iimpawu zepolyester taffeta.
Polyester taffeta ilaphu iimpawu: ipholiyesta taffeta na yemveli ifayibha imichiza ilaphu, kunye nomgangatho elungileyo, ixesha elide kwaye banxibe-enganyangekiyo, cheap, kulula ukuba ukukhathalela kunye nezinye izibonelelo, abantu uthando. Ingakumbi emva kokuqhubekeka nzulu kunye nokusetyenziswa kwenkqubo yokutyabeka, ukubonakala komphezulu welaphu kuphuculwe kakhulu. Ngokukodwa, i-matte polyester silk yamkelwe. Ilaphu elenziwe ngeli laphu linombala othambileyo kunye nembonakalo enomtsalane, efanelekileyo ekwenzeni ukunxiba okungaqhelekanga, iimpahla zemidlalo kunye nokunxiba kwabantwana. Imibala eyahlukeneyo yongeza kumtsalane okhohlisayo. I-matte polyester taffeta yamkelwe ngenxa yokubonakala kwayo okuqaqambileyo kunye nexabiso eliphantsi, i-polyester taffeta inokwenziwa ngeebhatyi, iiambrela, iimoto, iimpahla zemidlalo, iibhegi, ulayini wemithwalo, iibhegi zokulala, iintente, amakhethini eshawa, amalaphu etafile njalo njalo. Poly Taffeta luhlobo lwendabuko yemichiza yefayibha yelaphu. Sele idumile kangangexesha elithile, kodwa ukuthengisa kuye kwancipha ngokongezwa kwesivuno esitsha samalaphu okwenziwa. Kwiminyaka yakutshanje, ipholiyesta taffeta ilaphu kunye matte isilika, kunye neempawu ezimibalabala ezintsha emarikeni. Basebenzisa imisonto yamatye epholiyesta, ethambileyo nomtsalane ngakumbi. Kukulungele ukwenza iimpahla eziqhelekileyo zemidlalo yabantwana. Kukho imibala emininzi, umzimba ongasentla unemfashini, wongezwa kumtsalane okhohlisayo. I-matte polyester taffeta kulula ukuyamkela ngenxa yokubonakala kwayo okuqaqambileyo kunye nexabiso eliphantsi. *** kufutshane, uxinizelelo oluphezulu lweentsiba taffeta zinomtsalane okhethekileyo. Ezele ngamandla. Ikwayinto eyintsimbi enobungqina obucekeceke obufunwa ngabantu kwifolda yoqobo. "I-290T okanye ngaphezulu kwepolyester taffeta" yamkelwe ngabenzi bempahla abaninzi. Ukucaciswa kweemveliso ngama-290T 300T 320T, njl.Izixhobo ze-polyester filament ezibandakanyekileyo zonke zi-gloss FDY48D / 48F 50D / 48F, njl., Ezibonakala zingcono kunangaphambili kwimarike.
Ngenxa yokuthengiswa kweebhatyi ezantsi, ijethi yamanzi ephantsi komhlaba yaluka “290T + ubushushu obukhethekileyo *** inamba” isetyenziselwa ioyile kunye nezipili ngasemva kwelaphu lejacket esezantsi, kunye nokufakwa kwebhatyi esezantsi ngentsiba elwa nentsiba ukutyabeka. I-warp kunye ne-weft zenziwe nge-polyester semi-blunt FDY50D / 48F kunye nokuluka okucacileyo kumjelo wamanzi jet. Ingene ngaphakathi ngokwe (290T okanye ngaphezulu) iinkcukacha. Ilaphu lihamba kancinci. Ukuncitshiswa kwealkali ngokudaya iplastiki ethambileyo kunye nezinye iinkqubo, ngokweemfuno zabathengi, ukucofa kunye nokuthontelana kunye nezinye iinkqubo zokugqiba ezizodwa, imveliso inezinto ezifanayo, icekeceke kwaye ithambile, umphezulu ogudileyo noethe-ethe, awuphazamisi kwaye ungangcolisi mpawu, awunakwenza kuphela Ilaphu lokuzonwabisa lamadoda nabasetyhini lelona lining lifanelekileyo lebhatyi ebusika. Mahle kwaye mellow, ngesimbo sanamhlanje. Ububanzi belaphu ngu-160 cm. Ngenxa yoxinano oluphezulu lwe-F, isitayile se-polyester taffeta sikhululekile ukunxiba, ke siyathandwa. Ke ngoko, ukuphela kwe-48D / 48F 50D / 48F 68D / 48F kwimarike yentsimbi ye-polyester kuthandwa kakhulu, kwaye ixabiso lentambo ye-polyester lenyuke ngokuphakathi.